Puntland oo soo dhaweysay shirka uu Madaxweynaha ku baaqay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Puntland oo soo dhaweysay shirka uu Madaxweynaha ku baaqay
Puntland oo soo dhaweysay shirka uu Madaxweynaha ku baaqay
Maamulka Puntland ayaa soo dhaweeyay oo taageeray shirka uu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku baaqay maalinta Sabtida in Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ku yeeshaan Magaalada Muqdisho.
Shirka oo lagu wado in uu ka furmo Xerada Afisyooni ayaa looga hadli doonnaa hirgelinta heshiisyadii 17-kii September iyo 16-kii February.
War ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri “Dowladda Puntland waxay soo dhaweysay dadaal ay waday Beesha Caalamka oo ku saabsan, sidii loo xalin lahaa caqabadaha ku xeeran arrimaha doorashada, waxaana laysla gartay in Sabtida 03 April 2021, ay Madaxda Dowladda Federaalka Somaliya iyo Dowladaha Xubnaha Ka ah DFS isugu yimaadaan shir hordhac u noqda shirka wadatashiga arrimaha doorashada.”
“Shirkan oo ay qaban qaabisay Beesha Caalamka ayaa ujeedkiisu yahay, si Madaxda Soomaaliyeed ay is afgarad uga gaaraan ajandaha shirka iyo sida ugu haboon, ee uu u qabsoomayo shirka wadatashiga.”
Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa Arbacadii ku baaqay in Madaxda Soomaalida ay yeeshaan wadahadal wax ku ool ah, isla-markaana ay dalka ka qabtaan doorasho loo dhan yahay, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii September iyo talo soo jeedintii Guddiga Farsamada ee 16-kii bishii February ku kulmay Magaalada Baydhabo.
Previous articleDowladda oo diiwaangelinaysa ciidamadii Cabdirashiid Janan
Next articleBixinta Basaboor Somaliga oo dib loo bilaabi doono 4-ta bishan